တစ်ဦးကား Nakhon Si Thammarat ငှားရမ်း | တစ်ဦးကားကလပ်ငှားရမ်း
Nakhon Si Thammarat ကားတစ်စီးငှားရမ်း Nakhon Si Thammarat
မော်တော်ကားငှားရမ်း Nakhon Si Thammarat
တစ်ဦးကားကိုငှား Nakhon Si Thammarat
ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးင်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံ, ရှာဖွေစူးစမ်းအကောင်းဆုံးကိုယ်ပိုင်ကား ofyour ဘီးနောက်ကွယ်မှပြုရှိမရှိ။ ဒါပေမယ့်ဝေးနေအိမ်ထဲကနေဖြစ်ခြင်းသင့်ကားဘယ်နေရာမှာ beseen ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, မော်တော်ကားငှားရမ်း Nakhon Si Thammarat န်ဆောင်မှုအတော်လေးစျေးပေါ inThailand ဖြစ်ကြသည်။ ပို. အရေးကြီးသည်သျောသူတို့ရှာတွေ့မှအတော်လေးလွယ်ကူပါတယ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ငှားရမ်းခြင်းကားတစ်စီးကုမ္ပဏီများသည်မကြာခဏလေဆိပ်အနီးတွင်တွေ့ရသည်။ ဤသည်ကိုရှာဖွေရန်သူတို့ကိုမြင်နိုင်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် SOAS ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာကုမ္ပဏီများသည်ကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့မောင်းထုတ်ရန် ofhaving သည့်ဒုက္ခကနေသင်တို့ကိုကယ်တင်ပြီးကတည်းကအကြီးဖြစ်သောတစ်ဦးယာဉ်မောင်းများပါဝင်သည် thatalready packages များဆက်ကပ်။ အပြင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ရှာဖွေစူးစမ်း don'tmind လျှင်ပင်, တစ်ဦးကားမောင်းသူရှိခြင်းကိုသင် thescenery ပိုကောင်းပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်။
အများစုမှာ Si Thammarat drivers တွေကိုယဉ်ကျေးများနှင့်လေးစားမှုရှိပါတယ်ကားတစ်စီး Nakhon ငှားရမ်း။ သူတို့ကကျိန်းသေဒေသအတွက်အကောင်းဆုံးခရီးသွားဧည့်အစက်အပြောက်န်းကျင်ကိုသင် mindtouring လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မလိုအပ်သော်လည်း, နေ့လယ်စာများအတွက်ယာဉ်မောင်းတစ်ခုခုဝယ်ဖို့သေချာပါစေ။ အဆိုပါယာဉ်မောင်းကနဦးငြင်းဆန်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုကြဘူး။ သူတို့ကလက်ဟန်ခြေဟန်တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ costsusually တည်နေရာပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားပေမယ့်တစ်နိုင်ငံလုံး Nakhon Si Thammarat စျေးပေါန်ဆောင်မှုစံစျေးနှုန်းများမယ့်ကားငှား။
တစ်ဦး startingpoint အဖြစ်, သငျသညျကိုအမေရိကန်အမေရိကန်တစ်ဝှမ်း $ 35 တစ်ရက် $ 30 ကိုသင်ကကုန်ကျကားတစ်စီးငှားရမ်း Nakhon Si Thammarat မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါက thedriver မပါဘဲင်ပေမယ့် 7% VAT ကိုနှင့်အတူပါဝင်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအာမခံချက်အဖြစ် adeposit လိုအပ်စေခြင်းငှါသတိပြုပါပါနဲ့။ သင်သည်သင်၏ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုသုံးပါနှင့်သိုက်မပါဘဲ withrenting ဝေးရနိုင်ပေမယ့်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် forDriving သိကောင်းစရာများ
သင်ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းအပေါ် reallyinsist လြှငျ, ပထမဦးဆုံးစိတ်တွင်အောက်ပါတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သေချာစေပါ:
·ထိုင်းနိုင်ငံ, သင် theleft အပေါ်မောင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းရဲ့ဘေးထွက်ညာဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဗြိတိန် practicedin ရဲ့အဘယ်အရာနှင့်ဆင်တူသည်။
·ထိုင်းနိုင်ငံကအရမ်းနေ့ကို hotduring ရ, ဒါကြောင့်ကြိမ် atall ဓါတ်ကိုပြန်လည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သင်နှင့်အတူရေကိုရောက်စေဖို့သေချာစေနိုင်ပါတယ်။
·ကာကွယ်မောင်း။ သင်တစ်ဦးကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်မောင်းနှင်နေပေမယ့်ထိုင်း driversin တက္ကစီနှင့်ဘတ်စ်ကားမဆင်မခြင်ဖြစ်လေ့ရှိသောကြောင့် justbecause မဟုတ်ပါဘူး။
·မော်တော်ဆိုင်ကယ်မြင်းစီးသူရဲများလွန်း quiteaggressive နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်သူတို့ထံမှဝေးနေပါ။
notrelatively စျေးပေါလျှင်·ကားရပ်ရန်မကြာခဏအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ယာဉ်မောင်း neutralto ၎င်းတို့၏ကားများစွန့်ခွာရန်မျှော်လင့်နေကြသော်လည်းလွယ်ကူလိုအပ်ပါကကလမ်းထဲကတွန်းခံရဖို့အဘို့လုပ်ရမည်။
·ဖုန်းပေါ်မှာ Talking illegaland သင်လက်မှတ်ရနိုင်သည်။
·ကြောင့်လမ်းမပေါ်တွင်မိုးသည်းထန်စွာထရပ်ကားအသွားအလာညဥ့် isn'trecommended မှာမောင်းနှင်။
တစ်ဦး addedtip အဖြစ်, ပထမဦးဆုံးကားကိုငှားရမ်း Nakhon Si Thammarat န်ဆောင်မှုကကမ်းလှမ်းအာမခံ၏အဆင့်ကိုစစျဆေးဖို့ကြိုးစားပါ။ တချို့က companiesmight တကယ်တော့သူတို့ကသာအာမခံတစ်ခု basiclevel သယ်ဆောင်အခါ, အပြည့်အဝအာမခံကမ်းလှမ်းပေါ်တွင်သင်ရောင်း။ ကိုယ့်လုံခြုံဖြစ်နှစ်ဆစစ်ဆေးမှုများလုပ်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့မကြာခဏခရီးထွက်တဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးမဟုတ် if you're ။ သင်ယူနိုက်တက် Stateswhere မောင်းနှင်မှုကနေဆိုရင်ကွဲပြားခြားနားသည်သင်တစ်ဦးငှားစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့လုပ်ရတဲ့အနေဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူကားအငှားလုပ်ငန်းကမ်းလှမ်းတဲ့ကားတစ်စီး Nakhon Si Thammarat ကုမ္ပဏီကြည့်ဖို့အတှကျသို့မဟုတ်ပါကပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။